San Htun's Diary: Yummy ... !
တရုတ်ပြည် ကွမ်ကျိုးမှာ ခွေးအရှင်လေးကို မီးကင်စားတာကို ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ တင်ထားတဲ့ yahoo သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရှုံ့ ချတာတွေ၊ ကန့် ကွက်တာတွေနဲ့ပွက်လောရိုက်သွားတာပေါ့။ မေ့အဖွားဆုံးလို့မေ့တို့ ရွာကို တခေါက်ရောက်ဖူးပါတယ်။ မေ့တို့ ရွာနားက ချင်းရွာကို ဖြတ်တော့ ကလေးတွေ ရုတ်စုရုတ်စုဖြစ်နေတော့ မောင်မောင်က သွားစပ်စုတယ်။ ခွေးလေးကို တုတ်ထိုးပြီး ကင်စားနေတာတဲ့။
ဖေချက်ကျွေးတဲ့ ဖားသားက ကောင်းမှကောင်း။ ဇပလင်နိုင်နိုင်နဲ့ ။ လယ်ကြွက်သားကလည်း ကောင်းတယ် ပြောတယ်။ ခွေးသားစားရင် ပူတယ်။ ခွေးသားစားတဲ့သူလာရင် ခွေးတွေက ဟောင်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်။
ကျောင်းက ဗီယက်နမ်မနှစ်ယောက်ကတော့ တကယ်အစုံစားတာပါ။ ခွေးသား၊ မြွေသား၊ ကြောင်သား၊ ဖားသားအကုန် ဘာဆိုဘာမှ မကျန်အောင် စားတာပါ။ ကူး..ကူးလို့အော်တဲ့ (ဘာငှက်မှန်း သူတို့ တောင် မသိတဲ့) ငှက်မည်းမည်းရဲ့ သွေးကို အစိမ်းသောက်တာတဲ့။ ဒီတော့ နီပေါတွေက ဖားသားကြိုက်ရင် နီပေါကို လာတဲ့။ နီပေါမှာ ဖားတွေ ပေါမှပေါ။ နီပေါအစားအစာတိုင်းက အာလူးနဲ့မဆလာပါတယ်။ အာလူး အာလူးလို့ပြောနေတော့ "do you call the potatoes as arlu?"လားလို့မေးတော့ "yes"တဲ့။ မဆလာကိုလဲ မဆလာလို့ခေါ်တယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ လမ်းဘေးကြောင်၊ လမ်းဘေးခွေး မရှိပါဘူးတဲ့။ ရန်ကုန်က စည်ပင်လို လမ်းဘေးခွေး ရှင်းလင်းရေး လုပ်စရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာရှင်းကြတာ ဗိုက်ထဲကို။
နွေဦးကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ငါးသွားမျှားကြတော့ စီနီယာနီပေါအကိုကြီးက "do you eat crocodile?" လို့လာမေးလို့ "I am not vietanmese. I am burmese." လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ ဗီယက်နမ်တွေ အစားသောင်းကျန်းတာကို ကြားဖူးတဲ့ စီနီယာက ဗီယက်နမ်ထင်ပြီး လာစနေတာလေ။
Lady Night Partyမှာ စီနီယာတွေ၊ ဂျူနီယာတွေက ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း၊ ကိုယ့်အတွေ့ အကြုံတွေအကြောင်း မိတ်ဆက်ရပါတယ်။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူက သူ့ မိသားစုအကြောင်း မိတ်ဆက်တဲ့အခါ သူ့ မှာ ခွေးလှလှလေးရှိတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ အားလုံးက ချစ်စရာကောင်းတဲ့စုတ်ဖွားလေးကို တွေးနေပေမယ့် ဗီယက်နမ်မလေးတွေကတော့ yummy.. yummy စားချင်လိုက်တာလို့တွေးနေပါသတဲ့ :)။
၁၆၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၁။